Raparivo : Mahatratra 20 Tapitrisa Ar ny hosodokony
05/09/2018 admintriatra 0
Efa nitsahatra tamin’ny fiangaliana ny talentany. Mbola ao anatin’ny tsy fahasalamana vokatry ny fianjerany amin’izao fotoana ilay mpiangaly sary Hosodoko, Roland Raparivo. Efa niampita amin’ny zanany Andriantiana Raparivo ny fanilon’izany fanaovana hosodoko izany, ary ity …Tohiny
« Emerging talent awards » : Fifaninana ho an’ny Mpaka sary
Handraisana mpandray anjara avy amin’ny firenena maro. Misokatra ho an’ireo liana sy manan-talenta amin’ny fakana sary na ny saripika ny fifaninanana iraisam-pirenena « Emerging talent awards ». Ny gazety boky « LensCulture » no mikarakara …Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Nihaona tamin’ny sekretera jeneraly lefitry ny ONU
Nihaona tamin’ny sekretera jeneraly lefitry ny vondrona firenena mikambana misahana ny raharaha politika Rosemary DiCarlo ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny fihaonambe ara-toe-karena FOCAC tany Beijing . Niompana amin’ ny fiatrehan’i Madagasikara fifidianana ny …Tohiny
SMM : Mitaky ny fanendrena ny filohan’ ny SRMV
Taorian’ ny filatsahan-kofidin’i Faniry Ernaivo filohan’ny sendikan’ny mpitsara teo aloha, dia nivoaka tamin’ny fahanginany ny SMM mitaky ny fanafainganana ny fametrahana ny filohan’ny SRMV, na ny seksionina miandraikitra ny fanisana ny fitaovana hampiasaina amin’ ny …Tohiny
“Raha fifidianana demokratika, manaja ny lalàna velona no nisy, dia azo ekena. Izany hoe fifidianana madio mangarahara tsy misy hosoka dia azo ekena”, io no nambaran’ny kandidà laharana faha-25 Marc Ravalomanana raha nanontaniana mikasika ny ...Tohiny